UCaptain Frederick Marryat kunye neencwadi zakhe ezi-5 | Uncwadi lwangoku
UFrederick utshata wazalwa e Londres Julayi 10 1792. Wayengumatiloshe kwaye wafikelela kwinqanaba umphathi kwi Umkhosi waselwandle IBritane. Kwakunjalo Umhlobo kaCharles Dickens kunye nenye ye ababhali bokuqala Iinoveli ngobomi baselwandle. Ndiyifumene ngenxa yothando lwam uhlobo. Ke namhlanje ndiza neencwadi zakhe ezi-5, ezifanelekileyo kwezi ntsuku zokuphumla, ubushushu kunye nokufunda ngokukhanya.
1 UFrederick utshata
2.1 Ipropathi kaKumkani
2.2 Inqanawa yesiporho
2.3 Uyibhala njani incwadi yohambo
2.4 IiNew Adventures zeNewton
2.5 Inja kasathana
UMarryat wajoyina Umkhosi waselwandle eneminyaka eyi-14 apho wakhonza khona de waba neminyaka engama-38. Wathatha inxaxheba kwi Imfazwe ka-1812 y waba ngumphathi enkosi ngokugqwesa kwimishini emininzi yomlo kunye nesayensi. Xa washiya umkhosi wenqanawa wazinikela ngokupheleleyo kuncwadi. Ibiyi umbhali wamabali kunye neenoveliZombini ezisekwe kubomi bolwandle kwaye zinikezelwe ku Uncwadi lolutsha okanye Ukoyikisa koyisayo.
Las Imiboniso kunye namava obomi bakhe elwandle sisiseko kunye nomongo iinoveli zakhe. Eyokuqala, UFrank Mildmay, yapapashwa ngo-1829, yaza yalandelwa ngabangaphezu kwamashumi amathathu, phakathi kwayo isihloko sayo sobomi bakhe siyabonakala Midshipman Kulula.
Ngokubanzi, Umsebenzi wakhe uqhelekile kwixesha lakhe, kunye neenkxalabo malunga nosapho kunye nenqanaba lentlalontle elihlala ligubungela isenzo elwandle. Bayithanda ababhali abakhulu bathanda UJoseph Conrad okanye u-Ernest Hemingway, kunye nefuthe CS Forester kwaye eyona ibalaseleyo kuzo zonke uhlobo, UPatrick O'Brian. Kwinqanaba layo lokugqibela ubhalele abantwana. Isihloko sakhe esaziwa kakhulu Abathinjwa behlathi.
UWilliam Seymour yinkedama esencinci emiselwe ukuba isebenzele inkosi, Kwaye kuya kufuneka uqalise i-Aspasia, inqanawa apho uya kufumana zonke iintlobo zokuzonwabisa kunye nokulwa notshaba lwaseFrance. Abanye babalinganiswa kunye neziganeko ezixelayo zisekwe ngokuthe ngqo kumava okwenyani, njengokuchazwa komlo phakathi kwesaqhwithi esikhulu.
Ukutshata kusizisa kwesi sihloko ilivo leFlying Dutchman, Yeyona nqanawa yeziporho idumileyo emhlabeni. Intsomi yantlandlolo yaqala ngumphathi wenqanawa yaseDatshi ebizwa ngegama UWilliam Vanderdecken, owenza isivumelwano nomtyholi ukuba akwazi ukuhamba elwandle nangayiphi na imeko yendalo ebekwe nguThixo kuhambo lwakhe. Kodwa xa uThixo efumanisa, ekumohlwayeni uyamgweba ukuba ahambe ngenqanawa ngonaphakade ngaphandle kokuchukumisa umhlaba.
Uyibhala njani incwadi yohambo
U-Marryat ubhale apha, ngoburharha obukhulu kunye nobuchule, a Ukuhlekisa okuhlekisayo kwincwadi yokuhamba yefashoni Yiyo yonke ingqumbo ngexesha lakhe. Ixelela uthotho lweengcebiso malunga nebali lokuhamba apho umhambi enganyanzelekanga ukuba abeke unyawo kwilizwe afuna ukulityelela. Umcimbi ongundaba-mlonyeni nakwinkulungwane yama-XNUMX.
IiNew Adventures zeNewton
UNewton Forster ngumlinganiswa ophambili kule noveli ukuba Kufuneka usinde kumadabi anegazi kunye nolwandle kunye namadoda, amkhokelela kuyo Ukwaphuka kwenqanawa kwiiIndies kwaye bamthintela ekufumaneni isikhundla kwiNkampani yasentsomini enegama elifanayo. Kwaye yindawo apho aya kuba ngumphathi, oko kukuthi, umntu wolwandle.
Kulesi sihloko siya kuso 1699 apho sihlangana khona nesloop yungfrau, Owona msebenzi wakhe kukujikeleza iChannel yeNgesi. Kukuthintela ukuthutyeleziswa kunxweme lwaseFrance, kunye negosa lakhe elilawulayo, uLieutenant Igama lokuqala Cornelis lithetha ntoni?Ikwayikhuriya yasebukhosini yaseKing William kunye noMongameli Jikelele waseHolland.
Kodwa ophambili kule noveli yinja yakhe iMalaspulgas, ngenkangeleko yomzimba elusizi kunye nokujonga okukhohlisayo okumenza into yentiyo ngabo bonke abasebenzi. Yi Amathambo amancinci, Isicaka esincinci sikaCornelis, ogqiba kwelokuba abhengeze imfazwe ngaphandle kwekota exhaswa ngamaqabane akhe. Kodwa bothuka wonke umntu, ngaphandle kwemizabalazo yabo engapheliyo, inja ihlala ikwazi ukuphila kwaye ilivo lenziwa lakhe zombini amandla angaphezu kwendalo kunye ne-diabolical.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » UCaptain Frederick Marryat kunye neencwadi zakhe ezi-5